Ambohimanambola Nahazo fahafahana vonjimaika ireo nandroba mpivaro-kena
Nahazo fahafahana vonjimaika ireo zatovo roalahy nanafika sy nandroba vola tao amin’ny mpivaro-kena iray teny Ampahimanga Ambohimanambola tamin’ny alahady 09 aogositra 2020 teo rehefa niakatra fampanoavana tamin’ny talata 11 aogositra teo.
Antohomadinika Tratra ilay mpanendaka poketram-behivavy
Vehivavy iray 23 taona handeha hamonjy fodiana ny 10 aogositra lasa teo no voaendaka teny Antohomadinika.
Isoanala betroka Olona 2 maty rotiky ny bala
Mitohy ny fikarohana ireo olon-dratsy roalahy nitifitra nahafaty mpampianatra iray sy lefitry ny lehiben'ny fokontany, tany Antsonjomalinika, 6 kilaometatra miala an'Isoanala Betroka.
Saron'ireo zandary avy ao amin'ny tobim-paritry ny zandarimariam-pirenena ao Sambava ireo olona miisa 6, jiolahy sy jiovavy izay nokarohina fatratra fa mpanao vola sandoka sy mpanamboatra fitaovam-piadiana entina manao asan-jiolahy, ny sabotsy teo. Nosavaina ny tranon'izy ireo tao Ambatofitaratra sy Besopaka Ambany ary Analapenja samy any Sambava, ka tra-tehaka tamin'izany ireo porofo mivaingana rehetra toy ny lela-vola sandoka Ar 20.000 miisa 157 izay mitontaly Ar 3.140.000. Toraka izany koa ny basy poleta vita tefy gasy miisa 09, lasitra basy miisa 02; bala miisa 02 karazan'akora sy fitaovana fanamboarana basy maro niampy taratasy hosoka isan-karazany. Niaiky ny heloka vitany izy ireo.